Mpanamboatra penina ambongadiny Wholesale mpanamboatra sy mpamatsy | Sheerfond
Mipetraka amina birao milamina, eo amin'ny latabatra misy anao, misy mpihazona penina tsara tarehy, izay afaka mitahiry ny fitaovanao ao amin'ny birao, manefa ny findainao ary azo ampiasaina ho fijanonan'ny telefaona findainao. Hamirapiratra ihany koa izy io, mahatonga anao maniry Ny zavatra atolotray dia mamirapiratra ao amin'ny birao, ary hiova amin'ny loko isan-karazany, ka ny namana manodidina anao hiandry ny fandinihana azy, izay azo eritreretina kokoa, no mahasambatra kokoa ny asanao , ary mankafy ny fahafinaretan'ny fiainana eo am-piasana. Faingana ary manome soso-kevitra ...
Mipetraka amina birao milamina, eo amin'ny latabatra misy anao, misy mpihazona penina tsara tarehy, izay afaka mitahiry ny fitaovanao ao amin'ny birao, manefa ny findainao ary azo ampiasaina ho fijanonan'ny telefaona findainao. Hamirapiratra ihany koa izy io, mahatonga anao maniry Ny zavatra atolotray dia mamirapiratra ao amin'ny birao, ary hiova amin'ny loko isan-karazany, ka ny namana manodidina anao hiandry ny fandinihana azy, izay azo eritreretina kokoa, no mahasambatra kokoa ny asanao , ary mankafy ny fahafinaretan'ny fiainana eo am-piasana. Faingana ary omeo vokatra tsara toy izany ho an'ireo mpanjifanao sy namanao malala! Ny tena zava-dehibe dia maika fa hiaina izany ny tenanao.
1. Fampiasana fitehirizana birao: azonao atao ny mametraka penina, antsy, mpanapaka, stapler, earphone, tariby mametra, ary kojakoja birao hafa ary vokatra elektronika ao anaty boaty fitehirizana, ary tsy ho hitanao mihitsy ilay birao mikorontana.
2. Fandefasana finday tsy misy tariby: finday 10W tsy misy ilana azy, tsy mila manao asa ampanaovina finday, apetraho amin'ny telefaona finday ilay vokatra, ary ampidiro avy hatrany ny findainao, izay mety, mety, na mety.
3. Avelao hamirapiratra ny sary famantarana anao, miovaova hatrany ny lokony, afaka mahasarika ny mason'ny namana, mahita ny sary famantarana anao, manao doka amin'ny fiainana.
4. Ny fiasan'ny finday, ny telefaona finday dia apetraka amin'ny mpihazona azy, manafaka ny tananao ary manome fahalalahana bebe kokoa ny tananao.
5. Ity vokatra ity dia mampiasa fitaovana fiarovana tontolo iainana PU azo simba, izay sariaka amin'ny tontolo iainana sy mahasalama ny vatana.
6. Ny endrik'ilay vokatra dia tena tsara tarehy.
Ny tena fampiharana ny vokatra:
(1) Fanomezana ho an'ny namana sy orinasa, fanomezana fampiroboroboana.
(2) Birao fanoratana
Fampidirana ny famokarana:
Ny orinasanay dia nandalo ny fanamarinana rafitra kalitao ISO9001. Ny fitaovan'ny vokatra dia nosedraina mafy. Voafehy tsara ny vokatra mandritra ny dingan'ny famokarana. Ny famokarana ny vokatra dia 100% vita tanana. Ny vokatra tsirairay dia tsy maintsy hosedraina alohan'ny handaozany ny orinasa mba hahazoana antoka fa mandray ny mpanjifa Ny vokatra rehetra tonga dia vokatra mendrika.
Ity ihany koa ny vokatra arahinay, avelao ny siansa sy ny haitao hanompo ny fiainana, avelao ny zava-baovao hitondra fahasambarana
Telegrama IPone, TYPE-C Cable, tariby micro, paingotra finday
Famandrihana tsy misy tariby
Fanomezana asa ara-barotra vaovao, fanomezana fampiroboroboana ， fanomezana ho an'ny frer
haben'ny vokatra 180mm * 100mm * 115mm
lanjan'ny vokatra 250g
fonosana habe 190mm * 110 * 115mm
boaty sary miaina
isa / isaky ny boaty
lanja / isaky ny boaty
Teo aloha: Fitaovana fitahirizana
Manaraka: 3in1 tsy misy tariby famandrihana pad totozy
Fihazonana Penina Famoronana
Mpihazona penina mpanatanteraka
Hevitra famolavolana Pen Holder
Pen Holder ho an'ny birao
Pen Holder hoditra
Holder penina finday tsy misy tariby
LED totozy famahanana pad mouse